INDLELA #UTSHINTSHO OKANYE UKUSETYENZISWA KWIPHASIWADI YE-EMAIL? - IBHLOG
INDLELA #UTSHINTSHO OKANYE UKUSETYENZISWA KWIPHASIWADI YE-EMAIL?
UTSHINTSHO OKANYE UKUSETYENZISWA KWIPHASI-MVUME YE-EMAIL NOKUYA
I-AT & T ngomnye wabanikezeli beenkonzo ze-intanethi abaphambili eMelika nase Canada. Ngaphandle kwe-Intanethi, i-AT & T ikwabonelela ngeenkonzo ze-imeyile kubasebenzisi bayo. Njengayo nayiphi na iakhawunti ye-imeyile, iakhawunti ye-web ye-AT & T ikhuselekile nge-ID yomsebenzisi kunye nokudityaniswa kwephasiwedi. Kucacile ukuba inani elikhulu labasebenzisi Guqula iphasiwedi ye-imeyile ye-AT & T ukugcina iakhawunti yabo ye-imeyile ikhuselekile. Kule bhlog, siza kubonelela ngamanyathelo alula ukutshintsha okanye ukuseta kwakhona iphasiwedi ye-imeyile ye-AT & T.
Zimbini iindlela zokutshintsha igama lakho eliyimfihlo kwiakhawunti ye-imeyile ye-AT & T:
Reset your password without the current password.
Change your password with the current password
Apha siza kuthetha ngeendlela zombini zokutshintsha iphasiwedi ukuze uphumle ngokulula okanye utshintshe iphasiwedi yeakhawunti ye-imeyile ye-AT & T, nanini na bayifuna.
Setha kwakhona iphasiwedi ye-imeyile ye-AT & T xa ungayazi iphasiwedi
Ukuba uyilibele iphasiwedi yakho ye-imeyile ye-AT & T, kwaye kufuneka usete kwakhona iphasiwedi yeakhawunti ye-imeyile ye-AT & T. Emva koko landela le ndlela ingezantsi yokufumana iakhawunti yakho ye-imeyile ye-AT & T ngaphandle kwepassword yangoku.
Inyathelo 1: Kuqala, yiya kwiphepha lewebhu le-AT & T lokungena. Cofa kwi Ulibale iphasiwedi ukuvula iphepha lokubuyisela kwimeko yesiqhelo.
Iiprojekthi zeruby zabaqalayo
Inyathelo 2: Ngoku, kuya kufuneka unikeze idilesi ye-imeyile ye-AT & T okanye i-ID yomsebenzisi kwicandelo ngalinye. Emva koko, nqakraza Qhubeka iqhosha.
Inyathelo 3: Ngoku, kuya kufuneka ukhethe ndiza kuphendula imibuzo yam yokhuseleko. Le ndlela yokubuyisela kwimeko yesiqhelo yeyona ilungileyo kuwe ukuze wazi iimpendulo zemibuzo oyimisileyo ngexesha lokubhalisa. Ukuba awukwazi ukuphendula imibuzo, ungasebenzisa enye idilesi ye-imeyile ukufumana iphasiwedi.
Inyathelo 4: Kwilinye icandelo ledilesi yemeyile, kuya kufuneka unikeze idilesi ye-imeyile enxulumene neakhawunti yakho ye-imeyile. Emva koko, i-AT & T iya kwabelana ngekhowudi yokuqinisekisa kwenye idilesi ye-imeyile.
Inyathelo 5: Ngenye indlela, unokukhetha ukundibhalela ikhowudi okanye unditsalele ikhowudi ukuba unenombolo yakho yefowuni enxulumene neakhawunti yakho. Uya kufumana ikhowudi yokubuyisela kwifowuni yakho.
Inyathelo 6: Emva kokuqinisekisa isazisi sakho, kuya kufuneka wenze iphasiwedi entsha yeakhawunti ye-imeyile ye-AT & T kwaye uphinde uyichwetheze ukuze uqinisekise. Ngoku ungangena kwiakhawunti yakho usebenzisa ipassword entsha.
Guqula iphasiwedi ye-imeyile ye-AT & T: Xa unePassword
Kulula kakhulu ukutshintsha i-imeyile yakho ye-AT & T xa usazi iphasiwedi yakho yeakhawunti. Kukho amanyathelo ambalwa alula ekufuneka elandelwe ukutshintsha iphasiwedi yeakhawunti ye-AT & T.
Inyathelo 1: Yiya kwiphepha lokungena le-AT & T kwaye uchwetheze idilesi ye-imeyile okanye i-ID yomsebenzisi.
Inyathelo 2: Ngoku, cofa kwiProfayile yam kwaye uskrolele ezantsi ukuze ufumane ikhonkco lokuSeta igama eligqithisiweyo.
Inyathelo 3: Chwetheza igama eligqithisiweyo lwangoku ukuze uqinisekise ukugunyaziswa kwakho kwiakhawunti kwaye emva koko ufake Iphasiwedi eNtsha, kwaye uyichwetheze kwakhona kuQinisekisa iPhasiwedi eNtsha. Ngoku, ngena kwakhona usebenzisa iphasiwedi entsha.
Nje ukuba uwagqibile la manyathelo, kuya kufuneka ube nokufikelela kwiakhawunti yakho ye-imeyile ye-AT & T. Ukuba ujongene nemicimbi efanayo kwaye ufuna uncedo lobuchwephesha olunxulumene Hlela kwakhona iphasiwedi ye-imeyile ye-AT & T . Emva koko nxibelelana neqela lethu le-imeyile ye-AT & T ye-imeyile ungacofa inombolo yasimahla + 1-855-709-0346 kwaye ufumane uncedo kwangoko kumntu wethu we-imeyile. Iqela lethu lenkxaso ye-imeyile ye-AT & T iyafumaneka 24 * 7.
Umthombo we-URL: https://sites.google.com/view/change-or-reset-att-email-pass/home
#Ukutshintsha kwi-imeyile kunye negama lokugqitha le-imeyile #wutshintsha kwi & t ipaswedi yeposi #utshintsho kwi & t iphasiwedi
UKUTSHINTSHA OKANYE UKUSETYENZISWA KWE-IMEYILI KWI-IMEYILI IPHEPHA LE-AT & T lelinye labanikezeli beenkonzo ze-intanethi abaphambili eMelika nase Canada. Ngaphandle kwe-Intanethi, i-AT & T ikwabonelela ngeenkonzo ze-imeyile kubasebenzisi bayo. Njengayo nayiphi na iakhawunti ye-imeyile, iakhawunti ye-imeyile ye-AT & T ikhuselekile nge-ID yomsebenzisi kunye negama lokugqitha
Umyalelo we-curl akafumanekanga ubuntu
indlela yokuthenga i-divi crypto
uyithenga njani shiba inu token
cc myalelo kwi-linux
izinto endinqwenela ukuba ndizazi ngaphambi kokuba ndiqale inkqubo